Teritery ihany | Hevitra MPANOHARIANA
2007-04-21 @ 10:03 in Andavanandro
Mahavariana ! zavatra niseho tokana monja dia nampitohana ny fifamoivoizana hatrany Tsimbazaza mandalo an’i Manakambahiny iny, mandalo an’Ambanidia ka mipaka hatrany Ampandrana ka mila hahatratra an’Antanimena. Tsy adino ny any Ambohitsoa sy ny manakaiky an’i Mandroseza amin’ny lalana ilany ary ny lalana mikatso mankany sy avy any Ambohipo ihany koa. Tsy mampino nefa dia nisy tokoa omaly Zoma 20 avrily 2007.
Nisy razana nentina am-piangonana teo amin’ny fiangonana kristiana iray ao Ambanidia alohan’ny andevenana azy any amin’ny fasan-drazany. Mba manana fametrahana fiarakodia ihany ny fiangonana fa tsy ampy izany noho ny hamaroan’ny fiara. Ankevitry ny ho olona manamanana matoa be fiara tahaka izao manaraka ity fianakaviana manamanjo ity. Rehefa manana toy izany indrindra anefa dia somary lavalava ny fotoana ao am-piangonana.
Izao anefa, rehefa tsy antonona ny fametrahana fiara ny tokotanim-piangonana (andeha atao hoe izay) dia mametraka ny fiara amin’ny ilan’ny arabe avokoa ireo manana fiara hafa rehetra. Tsy dia misy lalana ho an’ny mpandeha an-tongotra loatra anefa amin’io faritra io hametrahana fiara koa dia eny amin’ny arabe ihany noho izany ny fiara ambiny tsy tafiditra an-tokontany no mijanona. Vokany lasa lala-tokana ilay lalana azo nifanenana teo. Manomboka misaritaka amin’izay ny fifamoivoizana.
Ny tena loza dia nanomboka mitaovovonana indrindra ny fotoana tao am-piangonana ka tsy nitsahatra raha tsy efa tamin’ny telo mahery tany ho any. Izany hoe tao anatin’ny fotoana firavana sy fidiran’ny mpiasa sy ny mpianatra indrindra no nampikatso ny fifamoivoizana. Tsy maintsy mifandimby mandeha ny andaniny sy ny ankilany mba hampirindra kokoa ny fifamoivoizana efa tery. Tsy misy afa-po ny rehetra ain’izany saingy aleo mikisaka toy izay tsy mandeha mihitsy. Ny mandeha an-tongotra indray no tonga aloha hatrany.
Dia lasa ny saina mahita ka manao hoe dia tsy misy vahaolana mihitsy ve eto amin’ity faritra ity ? Isak’izay misy manjo na mariazy ao amin’io fiangonana io dia mikatso hatrany ny lalana. Heveriko fa mba tokony hifanaraka amin’ny ivotoeram-pampianarana ambony katolika (izay Lycée français teo aloha) manana toera-malalaka azo lazaina fa lehibe ihany eo akaiky eo ry zareo amin’ny fametrahana fiara fa tsy hionona fotsiny amin’ny ilan’ny arabe izay hita mivandravandra fa mahasorena ny mpiara-monina ny fihetsika tahaka izany. Sa dia tena sarotra ve ny mifanaraka ?
Hevitra mety tokoa io arosonao ho vahaolana io, fa mandra-pahatanterak'izany (raha ho toa ka hanao izany ny mpiandraikitra ny fiangonana) dia ny mpitondra fiara hakao amin'ilay fiangonana no tokony hieritreritra, fa tena fitiavan-tena be loatra ary tsy firaharahiana ny lalan'ny fitondrana fiara no ataony. Ary aiza ny mpampanoa lalana amin'izany? Adiny telo be izao ve no mitohana ny fiseraserana dia avela amin'izao.
Mbola ho ela ihany isika itony vao hivoatra ka! Raha tany amin'ny tany hafa izany dia efa voapetaka "contravention" ny fitaratra eo anoloana.
Nampidirin'i Su @ 08:31, 2007-04-23 [Valio]